Xiisadda dalka Masar wali ka taagan - BBC Somali
Xiisadda dalka Masar wali ka taagan
Madaxwaynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in Masar aysan dib ugu laaban karin sidii ay ahayd ka hor kacdoonka ka dhanka ah madaxwayne Mubarak, lana joogo waqtigii isbadal la samayn lahaa.
Isagoo waraysi siinaya telefishin ayaa Mr Obama uu sheegay in madaxwayne Mubarak uu og yahay waxa uu sameeynayo iyadoo maalin kasta ay dibadbaxyo jiraa, balse ay caddahay in dadka Masar ay doonayaan doorasho xor ah oo cadaalad ku dhacda.
Mr Obama ayaa sidoo kale sheegay in kooxda mucaaradka ugu wayn ee Iqwaanul Muslimiin aysan haysan taageero aqlabiyad ah.
Dibadbaxyo ayaa maalin kale ka sii socda bartamaha Qaahira.
Kooxda Iqwaanul Muslimiin ayaa ka mid ah kooxaha mucaaradka ee ka qaybgalay wadahadalo lala yeeshay dowladda. Rasmi ahaan wali iqwaanul muslimiin waa ka mamnuuc dalka.